'चरम ब्रीथ' K9 मास्क एयर फिल्टर रिफिलहरू ()) प्याक - N5 र सक्रिय - राम्रो एयर टीम द्वारा K95 मास्क
घर > कुकुरहरूका लागि एयर फिल्टर फेस मास्क > 'चरम ब्रीथ' K9 मास्क एयर फिल्टर रिफिलहरू ()) प्याक - N & र सक्रिय कार्बन
मा तुलना $ 25.00
सानो - १..20.00 USD अमेरिकी डलर मध्यम - १...। अमेरिकी डलर ठुलो - $ १२.20.00 USD अमेरिकी डलर अधिक ठूलो - $ .20.00 .XNUMX.०० अमेरिकी डलर
'चरम ब्रीथ' N95 र सक्रिय कार्बन एयर फिल्टर (5) K9 मास्कको लागि प्याक रिफिल
N95 गैर तेल मा आधारित कण पदार्थ को 95% सम्म फिल्टर।
पीएम २..2.5 ले हानिकारक विषाक्त कणहरू चौडाइ २. mic माइक्रोन चौडाइको धुवाँ, खरानी, ​​धुलो, रसायन, एलर्जेन, परागकण, कालिखुला, धुवाँ, र ब्याक्टेरिया जस्तै फिल्टर गर्दछ।
सक्रिय कार्बन फिल्टर - प्रदूषण अणुहरूसँग बन्डहरू विष र ओजोन घटाउँछन्।
'अस्वस्थ' मा 'खतरनाक' AQI २-250--500०० मा प्रयोग गर्नुहोस्।
ओजोन 90 ०% ले घटाउँछ।
K9 Mask® एयर फिल्टर रिफिलहरू:
सानो, मध्यम, ठूलो, र अधिक ठूला आकार K9 Mask® एयर फिल्टर मास्कको साथ कुकुरहरूको लागि प्रयोग गर्नुहोस्।
K9 मास्कमा मैले प्रत्येक प्रतिस्थापनयोग्य फिल्टर कति समय प्रयोग गर्न सक्छु?
हामी प्रयोग गर्न सिफारिस गर्दछौं eआच एयर फिल्टर चार घण्टा सम्म। यद्यपि ठूला कण वायु अवस्था, ओसको स्तर, वा फिल्टरमा अत्यधिक फोहोरको आधारमा चाँडै हवा फिल्टर प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक हुन सक्छ।
कहिलेसम्म मेरो कुकुरले 'चरम ब्रीथ' एयर फिल्टरको साथ K9 मास्क लगाउन सक्छ?
लामो उपयोगले कुकुरको स्वाभाविक क्षमतालाई असर पार्छ विशेष गरी ant० डिग्री सेल्सियस (एफ) २° डिग्री सेल्सियस वा सोभन्दा माथिको तापक्रममा। यो मास्क एक छोटो अवधि को लागी प्रयोग गर्न को लागी र करीबी निगरानी मा गरीएको छ। भन्दा बढि को लागी सावधान रहनुहोस् 10 मिनेट एक समय मा। पछि 10 मिनेट तपाईको कुकुरको सास फेर्न र पेन्टि check जाँच गर्न को लागी केहि मिनेट को लागी मास्क हटाउन सक्नुहुन्छ K9 मास्क लगाउनु जारी राख्नुहोस्।
K9 मास्क लगाएको बेला सधैं तपाईंको कुकुरलाई निगरानी गर्नुहोस्। यदि तपाईंले मेहनतको सास फेर्नुभयो वा अति तापको स notice्केत देख्नुभयो भने मास्क तत्काल हटाउनुहोस्। यो मास्कले तपाईंको कुकुरलाई चोटपटक वा मृत्यु निम्त्याउन सक्छ। यो एयर फिल्टर उत्पादन प्रयोग गर्नु अघि तपाईंको कुकुरको स्वास्थ्यको बारेमा तपाईंको पशुचिकित्सकसँग परामर्श लिनुहोस्।
K9 Mask® मा एयर फिल्टर सम्मिलित गर्दै
मास्कको माथि जिपर खोल्नुहोस्। एयर फिल्टरलाई मास्कमा मास्कमा सम्मिलित गर्नुहोस् माथिको कालो पक्ष र तल सेता पक्षमा। फिल्टरको कर्भ किनारा मास्कको नाकको अनुहार राख्नुहोस्। मास्कको भित्र हावा फिल्टर प so्क्तिबद्ध गर्नुहोस् ताकि हावा फिल्टरको सबै किनाराहरू मास्कको छेउमा फिट छन्। मास्कमा जिपर बन्द गर्नुहोस्।
K9 मास्कमा हवा फिल्टर घुसाउन समस्या भइरहेको छ? हाम्रोमा जानुहोस् एयर फिल्टर भिडियो सम्मिलित गर्नका लागि FAQ पृष्ठ.
फिर्ती र एक्सचेन्जहरु
हामीसँग day० दिनको रिटर्न र विनिमय नीति छ।
K9 मास्कको लागि K9mask.com वेबसाइटमा बेचिएका उत्पादनहरूको लागि K9 मास्कको लागि हाम्रो एयरको नामको राम्रो एयर टीममा फर्कन्छ। यदि तपाईंले आफ्नो KXNUMX मास्क अन्य खुद्रा वा अनलाइन स्रोतहरू मार्फत खरीद गर्नुभयो भने तपाईंले खरीद गर्नु भएको भण्डारमा उत्पादन फर्काउनु पर्छ।
फिर्तीको लागि योग्य हुन, तपाईंको वस्तु नयाँ जस्तो हुन समान अवस्थामा हुनुपर्दछ। हामीलाई थाहा छ तपाईं आफ्नो कुकुरमा लाग्दै हुनुहुन्छ र कुकुरहरू गडबडी छन्। कुकुरहरू फिडगेटी हुन् त्यसैले हामी बुझ्दछौं कि यो तपाईंलाई १०० फर्काउँदा १००% सही हुँदैन। कृपया तपाईंको खरीदको फिर्ताको लागि चाहिने लेखिएको नोट समावेश गर्नुहोस्। हामी तपाईंलाई पूर्ण रिफन्ड प्राप्त गर्न सक्दो कोशिश गर्नेछौं।
यदि तपाईंलाई आकार परिवर्तन गर्न आवश्यक छ भने कृपया नयाँ साइजको बारेमा लिखित नोटको साथ उत्पादन फिर्ता गर्नुहोस् जुन तपाईं विनिमयको लागि अनुरोध गर्दै हुनुहुन्छ।
एक फिर्ती वा विनिमय को लागी तपाइँको उत्पादन कसरी फर्काउने:
कृपया तपाइँको नाम, अर्डर #, र तपाइँको फिर्ती वा विनिमय को कारण सहित नोट समावेश गर्नुहोस्। यदि तपाईं साइजको लागि एक्सचेन्ज अनुरोध गर्दै हुनुहुन्छ भने नयाँ नोट र तपाईंको नोटमा हालको शिपिंग ठेगानालाई सूचित गर्नुहोस्।
तपाइँ फिर्ताको लागि तपाइँको उत्पादन को ढुवानी लागत को लागी भुक्तान गर्न को लागी जिम्मेदार छ वा हाम्रो कार्यालय मा विनिमय।
यसमा पत्र पठाउनुहोस्:
राम्रो एयर टीम
8911 ब्रिजवुड ट्रेल
अस्टिन, TX 78729 XNUMX XNUMX २
मूल अर्डर शिपिंग लागतहरू फिर्ता योग्य छैनन्। हाम्रो अफिसमा फिर्ताको डेलिभरी प्रमाणित गर्न तपाईंले ट्र्याकेबल शिपिंग सेवा प्रयोग गर्ने बारे विचार गर्नुपर्छ।
एकचोटि तपाईंको फिर्ती प्राप्त भयो र निरीक्षण गरियो, हामी तपाईंलाई ईमेल पठाउनेछौं तपाईंलाई सूचित गर्नको लागि कि हामीले तपाईंको फर्केका वस्तुहरू प्राप्त गरिसकेका छौं। यदि तपाईं अनुमोदित हुनुहुन्छ भने, तपाईंको फिर्ती वा एक्सचेन्ज प्रक्रिया हुनेछ। एक क्रेडिट तपाइँको रकम फिर्ता को लागी धेरै दिन भित्र भुक्तानी को मूल तरीका लागू हुनेछ।
ढिला वा हराएको फिर्ता रकम (यदि लागू भएमा)
यदि तपाईंले आफ्नो खरीद फिर्ताको पछि फिर्ती प्राप्त गर्नुभएको छैन भने कृपया हामीलाई info@goodairteam.com मा सम्पर्क गर्नुहोस्।
प्रश्नहरू? हामीलाई कल गर्नुहोस्।
राम्रो एयर टीम - (877) 364-6275
प्रश्नहरू? हामीलाई ईमेल गर्नुहोस्।
K9 Mask® 'स्वच्छ ब्रीथ' एयर फिल्टरको साथमा मानिसहरुको लागि
$ 12.50 $ 15.00